Mabasa eMaoko Okurudzirwa kuMusangano weCODEPA muBulawayo
Chikumi 21, 2017
Musangano weCoordination Committee for the Development and Promotion of African handicraft, CODEPA, unosanganisira makurukota, nevamwe vashandi vehurumende vemunyika dzakasiyana siyana muAfrica, pamwe nevamwe vanhu vanoita zvigadzirwa zvemaoko watanga neChitatu muBulawayo vanhu ava vachibvumirana kuti mabasa emaoko akakosha zvikuru mukusimudzira hupenyu hweveruzhinji pamwe nehupfumi hwenyika.
Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu muBulawayo, mutevedzeri wegurukota rezvemabhizimisi madiki, VaNoveti Muponora, vati basa rekuita zvigadzirwa zvemaoko kana kuti handicraft muChirungu rakakosha zvikuru nekuti rinokwanisa kuitwa neveruzhinji kusanganisira vekumaruwa, risingade mari yakawanda kuti vatange kuriita.
VaMukonori vati vanhu vanoita basa iri vanosangana nezvimhingamupinyi zvakawanda kusanganisira kushaya ruzivo rwakakwana rwekuti votengesa sei kana kuti votengesera kupi zvigadzirwa zvavo uye kushaya zvikwereti kumabhanga kuti vavandudze mabasa avo.
Vatiwo musangano weCODEPA wakakosha sezvo uchipa mukana wekuti vanhu vazeye zvakasiyana siyana pamusoro pemabasa ezvigadzirwa zvemaoko.
Amai Florence Tembo vanogadzira ma-handbag vari muchikwata nemamwe madzimai mumusha weGwabalanda muBulawayo, uye ndemumwe wevanoita basa rekugadzira zvinhu nemaoko vange varipo pamusangano uyu.
Amai Tembo vaudza Studio 7 kuti vanoona musangano wakadai uchibatsira kuunza mitemo inokwanisa kusimudzira basa ravanoita.
Chizvarwa cheku nyika yeGambia VaLamin Susso ndemumwe wevanhu vekunze kwenyika varipowo pamusangano uyu. VaSusso vanogadzira zvinhu zvakadai sengoma negitare rinonzi kora. Vati kuve pamusangano uyu kunovabatsira kuti vapangane mazano nevamwe kuti vovandudza sei mabasa avo.
Izvi zvatsigirwawo naAmai Velia Makichi veMalwatte Women’s Craft Centre kuMarondera, avo vanogadzira magumbeze nezvimwe kubva kushinda yehwai.
Amai Tembo vati kunyange hazvo basa ravo rekugadzira mahandbag richivabatsira kuwana chouviri, pari zvino zvinhu hazvizi kunyatsovafambira zvakanaka nekuda kwekuti vanhu vakawanda havana mari yekutenga zvinhu zvavo.
Amai Makichi vabvumiranawo nedambudziko iri vakatiwo rimwe dambudziko ravari kusangana naro inyaya yekushaya mari yekusimudzira basa ravo.
Vati kunyange hazvo vakanzwa nezvemari inonzi inofanirwa kubatsira madzimai ari mumabhizimisi, havana ruzivo rwakakwana pamusoro pemari iyi.
Zimbabwe yakawana madhora mamiriyoni matatu kubva mukutengesa zvigadzirwa zvemaoko uye nyanzvi munyaya idzi dzinoti mari iyi inogona kukwira kana vanoita basa iri vakanyatsotsigirwa zvizere.
CODEPA mubatanidzwa wenyika makumi maviri nenhanhatu dzemuAfrica uye chinangwa chemubatanidzwa uyu ndechekusimudzira mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Muzinda wemubatanidzwa uyu uri munyika yeBurkina Faso.
Musangano weCODEPA unoitwa gore rega rega uye musangano wavhurwa nhasi ndewechinomwe kubva pakatanga mubatanidzwa uyu.